ANTSIRABE - TAONA 2018 : Hankalaza ny faha-5 taonany ny Vondron’ny mpanao gazety
Feno dimy taona amin’iny taona 2018 iny ny fijoroana ara-panjakan’ny Vondron’ny mpanao gazety eto Antsirabe. 20 mars 2017
Hetsika maro no nentina manamarika izany tsingerin-taona izany ka hisantarana izany dia ny fanatsarana ny tsangambaton’ny Holafitry ny mpanao gazety, eo amin’ny zaridaina eo Antsenakely.
Tapaka nandritra ny fivoriana notanterahina teny Andraikiba ny sabotsy faran’ny herinandro teo fa hofefena sy hovolena voninkazo ny manodidina izany tsangam-batao izany ka mialoha ny 3 mey, izay fanamarihana ny andro iraisam-pirenena momba ny asa fanaovan-gazety no hamitana azy. Amin’ny alalan’ny latsakemboka 2 000 Ariary isam-bolana ataon’ny mpikambana no hanatsarana ity tsangam-bato ity. Mbola maro amin’ireo mpikambana anefa no tsy nahavita io adidiny io ka nahatonga ny filohan’ny VMA, Caïus Raharison, nanentana ny mpikambana tsirairay mba hanefa ny adidiny.
Tsy ho amin’iny hetsika tahaka izao ihany, hoy izy, no ilaina ny vola fa eo dia eo tokoa ny fiahiana sy fijerena ny ara-tsosialin’ny mpikambana raha sanatria misy ny tsy salama sy namoy fianakaviana arakaraka izay voalaza ao anatin’ny lalana anatiny mifehy ny fikambanana.
Ankoatra izay dia mihevitra ny hanatontosa fety ihany koa ny mpikambana mba hanampiana ny vola eo am-pelantanana sy hoentina manamarika izay faha-5 taona nijoroany izay.
Marihina fa nandritra ny fivoriana teny Andraikiba, ny sabotsy teo, no nifampiarahaba noho ny fahatratrarana ny taona vaovao ny mpanao gazety teto Antsirabe niaraka tamin’ny vady aman-janany. Nisy ny fiarahana mikorana sy fety ary nisy ihany koa ny tatitry ny zava-bita nandritra izay fotoana nijoroany izay. Nandritra izany ihany koa no nampahafantarina ny rehetra ireo mpikambana vaovao hanampy isa ny fikambanana ka anisan’izany ny mpanao gaezetin’ny Ino Vaovao Faritra. Amin’izao fotoana izao dia efa amidy ao Vakinakaratra ity Gazety Ino Vaovao Faritra ity.